‘ये है मोहब्बते’ की हिरोइनले कति बोल्ड फोटासुट गराइन् ? | Kendrabindu Nepal Online News
‘ये है मोहब्बते’ की हिरोइनले कति बोल्ड फोटासुट गराइन् ?
२७ पुष २०७४, बिहीबार १८:४६
विदिशा श्रीवास्तव पछिल्लो समय स्टार प्लसको पपुलर शो ‘ए है मोहब्बते’ बाट टेलिभिजनमा डेब्यु गरेकी थिइन् । यस शोमा उनी रोशनीको भूमिकामा छिन् । यसमा आदित्य भल्लालाई ब्ल्याकमेल गरेर उनलाई बिवाह गराइन्छ ।
रोशनीको क्यारेक्टर त निकै सोझो देखाइन्छ । उनी गाउँले युवतीको भूमिकामा छिन् । तर, वास्तविक जीवनमा उनी निकै ग्ल्यामरस छिन् । उनी अक्सर शोसल मिडियामा आफ्नो बोल्ड फोटो अपलोड गरिरहेकी हुन्छिन् । विदिशा दक्षिण भारतिय अभिनेत्री हुन् ।
पछिल्लो पटक उनले फोटोशूट गराएकी छिन्, बोल्ड अवतारमा । उनी रातो साडीमा छिन् । त्यसमा कतिपयमा उनले छोटो लुगा पनि लगाएकी छिन् । उनी १८ बर्षभन्दा कम उमेरबाटै मोडलिङमा छिन् । उनले २००५ मा तेलुगु फिल्मबाट ठूलो पर्दामा पाइला राखेकी हुन् ।
Prev‘दिनभरी सुत्छु, रातभरी उठ्छु’– ज्योति मगर (भिडियो वार्ता)
अकाशलाई केटीको भित्री बस्त्र सुँघ्ने बानी ! कसले गरिन् यस्तो खुलसा ?Next